Umntu owaziyo kunye nokuhlaselwa kwakhe kwenzeka kungekuqala, yena, njengomthetho, ngokwakhe uya kuthetha indlela yokumnceda ngayo. Umzekelo, cela ukuba unike iyeza (ngokuqhelekileyo uyithwala kunye naye). Simele sizalise isicelo sakhe, uze ubize i-ambulensi. Xa umntu ebamba intliziyo yakhe, kodwa engayazi into ephosakeleyo kuye, kungcono ukuba ungabandakanyeki kuhlolwe kwaye unganiki amayeza. Iintlungu ezisekhohlo zesifuba asithethi ukuhlaselwa kwentliziyo. Ziyakunxulumaniswa nokutshatyalaliswa kwenkqubo ye-musculoskelet okanye ukuhlaselwa kwezilonda - kukho iindlela ezininzi.
Ugqirha kuphela onokwenza i-diagnostic echanekileyo. Musa ukuphazamisa ukuwa, zama ukuphakamisa ngokukhawuleza. Umntu onobungozi unokulimala kwintlambo yomlomo wesibeleko. Kodwa kukho ukuphuhliswa okukhulu kweziganeko: umntu akanalo izibonakaliso zobomi: akukho moya, i-pulse ayivekanga, abafundi abazange basabele ekukhanyeni. Unelungelo lokusindiswa - kwaye uxhomekeke kulabo abasondeleyo. Isicwangciso senyathelo: khangela ukuba ngaba i-airways iyadlula (nokuba akukho nto ilahlekileyo ngolwimi, i-prosthesis). Ukuba kuyimfuneko, bakhululwe. Emva koko wenze ukuphefumla okufakwayo kunye nangaphandle (ngokungathanga ngqo) intliziyo yokusila. Nabani na ongenayo imfundo yonyango angafunda ezi zinto zibalulekileyo. Uze ubize i-ambulensi. Yenza le nxaxheba kumcimbi wemizuzwana - ngokukhawuleza, bhetele. Kwimizuzu yokuqala yokuqala 1-2 emva kokumisa intliziyo yomntu ngokwenene ubuyisele ebomini. Kamva, xa kufika i-ambulensi, kodwa akafumani uncedo oluyimfuneko - akanakukufumana ithuba lokugcina. Nceda nceda! Ukuphefumula kwenhliziyo kunye nokuphefumla okwenziweyo kufuneka kwenziwe ukuba umntu akaphefumli, akanalo isifo kunye neempendulo zabafundi ekukhanyeni. Ekubeni kwimiqondiso yobomi, ezinjalo izenzo kwezinye iimeko zingabangela ingozi. Izinto ezisisiseko zokubonelela ngoncedo lokuqala ziya kunceda rhoqo naphi na.
Ukuba iinqanawa ezinkulu, umvini okanye umzobo, zonakaliswe, umntu kufuneka ancediswe ngokukhawuleza. Emva koko, ixesha elifutshane, igazi elilahlekileyo lilahlekile. Qinisekisa ukuba yeyiphi iinqanawa ezenzakaliswe, unako ngombala wegazi. Ukusuka kumthi we-artery ubomvu obomvu, obomvu, ukusuka kwintlambo - obomvu obomvu. Xa i-artery echaphazelekayo kufuneka ikhawuleze ngokukhawuleza ibhendi eqinile ngaphezu kwesilonda. Kuyinto enqwenelekayo ukuba yayinyumba. Kufanelekile ukubhala ixesha elichanekileyo kunye nokufakela inqaku kwi-bandage. Oku kuyimfuneko koogqirha (emva koko, ukuba iinqanawa kwilizwe elide liza kuhlala lide kakhulu - ngaphezulu kweeyure ezingama-2, i-necrosis yamathambo ingenzeka). Ukuba i-vein yonakalisiwe, kuyimfuneko ukunyanzelisa i-tampon kwaye ingcono yinyumba, ngokukhawuleza ukubopha isilonda. Kodwa endle nayiphi na into efanelekileyo iya kuyenza. Kwaye kuyimfuneko ngokukhawuleza kunokwenzeka ukuhambisa umntu kwiziko lempilo elisondeleyo.
Ngeentsimbi ezivaliweyo, kubalulekile ukulungisa isilungu kunye namalungu angasondeleyo. Konke kuxhomekeke kwindawo yokuphuka. Ukuba ityala lomsakazo lilimale (ibini lesifuba lesifuba, elisecaleni kwetna bone), kwanele ukubopha nge-kerchief. Xa amanye amathambo enzakele (umzekelo, i-brachial), kuyimfuneko ukusebenzisa ifayile kunoma iyiphi indlela ephuculweyo. Umzekelo, ukusuka kwiibhodi, ii-slats. Zifanele zisetyenziswe ukusuka kwicala elingaphandle kwendawo yokuqulunqa. Ngokomzekelo, ukuba ithambo linyuka phambili - i-langet ifakwe ngasemva. Ukuba akukho zindlela ezingalungiswanga, unokwazi ukubopha ingalo yakho kwisiqu okanye umlenze ukuya kwelinye umlenze. Kubalulekile ukubopha isambatho ngokukhawuleza kodwa kungekho mkhulu, Kungoko kungcono ukuba ungayithathi iingubo. Xa umonakalo emlanjeni, ungaze uvumele umntu ukuba akhuphuke
Ukuba kuyimfuneko ukutshatyalaliswa kombane, ngokukhawuleza ulungele umthombo wonakalo. Ngokufanelekileyo - cima umbane ngokupheleleyo. Kungakhathaliseki ukuba umchukumise umntu kude kwipropathi yamandla, isinyithi, esinye isixhobo sombane, usebenzisa umsila-umzekelo, intonga yomthi eyomileyo. Ukuba kunokwenzeka, gqoka iiglavu zerabha. Emva koko biza i-ambulensi. Ukuba kukho omnye umntu osondeleyo, zombini ezi zixhobo kufuneka zenziwe ngokufanayo. Ngomzuzu wokuqala, awukwazi ukuthintela umntu obetha ngothuko. Kufuneka ukuba ulinde de liye lugungqe, kuthathe amanyathelo okusindiswa. Ukuba kukho iimpawu zobomi, kufuneka uphakamise imilenze yakho, ukuze igazi elingcono lifike entliziyweni. Kwiisayithi zezilonda (oko kuthiwa "iibhile zamanje" - amacandelo okungena kunye nokuphuma kwamandla kagesi), iifayile ezinobumba ziyasetyenziswa. Iibhattshi, iiliti, i-plaids ayikwazi ukusetyenziswa, ukwenzela ukuba i-villi kunye neentambo zingangeni kwiilonda. Kwimeko enzima kakhulu, unokuzama ukwenza ukuphefumla okufakelwayo kunye nentliziyo yokuhlalisa intliziyo.
"Schizophrenia, njengoko kwathiwa"
Umntu uziphatha ngendlela ye-Ivanushka evela kwincwadi enqabileyo yaseBulgakov ethi "I-Master noMargarita": uyabetha, ekhwaza, elambele umntu ukuba asindise-afune? Okanye ngaba unayo i-hallucinations ebonakalayo okanye ebonakalayo? Ngokuzimela uyamnceda awukwazi. Umntu ongafanelekanga kufuneka ahlale ekhethiweyo - ngokukhethekileyo egumbini elingenayo ifestile okanye ngemivalo. Ngokukhawuleza ubize i-ambulensi.
Ingaba ngowomgangatho we-1 (ubomvu kunye nokuvuvukala kwesikhumba), i-2 degree (i-blisters ivela), isiqendu sesi-3 (i-necrosis ekhethekileyo yesikhumba), isiqendu sesi-3 (ukuchithwa kwesikhumba) kunye nokutshisa kakhulu 4 (eziphathekayo eziphathekayo eziphathekayo, izihlunu, ukuya kwithambo). Kwimeko yokuqala, kwanele ukupholisa isikhumba kwaye kusetyenziswe ikhambi lokutshisa - umzekelo, ipenolol. Nangona kunjalo, ukupholisa indawo yokutshisa kulandela amanzi, kodwa kungabi yiqhwa - ukuze kungabikho nqabileyo yamathambo, okuya kubangela ukwanda kwe-epithelization (ukuphilisa). Kwiimeko ezininzi kakhulu, amalungiselelo okushisa kunye nayiphi na into enamafutha angasetyenziswa. Oku kuya kuthintela ukuphilisa isilonda. Ngomlilo wesibini ukutshisa, ummandla otshisayo kufuneka utyutywe ngesisombululo se-antiseptic (furacilin, chloracil, rivanol) ecaleni kwayo. Ama-blisters akufanele avule - kukho umngcipheko wosulelo! Ukuba umonakalo ububanzi (indawo ezinkulu zesikhumba okanye indawo yokucoca isatshiswa), kufuneka uqhagamshelane nodokotela ngokukhawuleza. Ukunceda ugqirha wasebhenca kwaye kwaye ukuba i-blister yaqhekeza ngokutshatyalaliswa ngokupheleleyo. Kufuneka ugubungele indawo kunye neethambo ezibandayo, ezikhethiweyo (kodwa ungacinezeli, ungazibopheli!) Uze ugqirha. Ukutshisa okunzima (i-3 degree degree A, B, i-degree yesi-4) kufuna ukunakekelwa kwangoko kunyango. Izambatho ezinxibekileyo azikwazi ukususwa - unokulimaza ulusu. Unokuyinciphisa kakuhle imida yayo. Akunakho naziphi na imeko ukulawula ukususwa kweengubo zengubo ukusuka kwilonda, musa ukusebenzisa nayiphina imali phambi kokufika koogqirha.
Ukuba umntu uyazi, kufuneka ubeke emqolo wakhe. Beka umsila ophantsi phantsi kwentloko yakho. Inkqubela yokukhawulelana - enomngcipheko omkhulu, awukwazi ukuhamba nawe. Ukuba ulahlekelwa ingqondo, kufuneka ubeke umntu kwicala lawo. Khangela ukuba i-airways yayo iyadlula (hlambulula ukuba kuyimfuneko). Jonga ukuphefumla. Qiniseka ukubiza i-ambulensi. Ugqirha ukujongana nangobuhlungu obunzima bentloko - ukujonga ubungqina okanye ukungabikho nge-hematoma, nezinye iimonakalo zobuchopho. Iimpawu zokuhluthwa: ukuxhwala, i-foam ephuma emlonyeni. Into ephambili akuvumelekanga ukuba umntu alahlekelwe ulwimi. Kubalulekile ukungenisa nayiphi na indlela ephuculweyo (umzekelo, intonga) emlonyeni uze ukhuphe ulwimi. Kubalulekile ukuphakamisa intloko kwaye ugcine umntu kakuhle ukuba utyumba. Nceda nceda! Ezi nyathelo kufuneka zithathwe ukuba ziqeqeshiwe kulezi zindlela. Ukuba awukwazi njani, ungayithathi. Umntu obhekene nesithuthwane unokuluma ngamandla umntu owamnika uncedo olungenayo.
Ndilahlekelwe yimvakalelo yam
Ngaba le ndoda yaphela phambi kwakho? Ukuba wayeva iindaba ezibuqilima, ukulahlekelwa yintliziyo kungenzeka ngenxa yokunyuka kwemithambo yegazi. Okanye - ngenxa yokungabi ncitshiswa kwe-oksijeni (ukuba bekusegumbini elincinci). Kulo mzekelo kukulungele ukuba ahlambe ihembe lakhe ukufumana ukufikelela kwamahhala 02. Ukuphakamisa imilenze 45 degrees. Ukuzisa ekhaleni i-ammonia ayimfuneko - unokutshisa i-membrane. Ukuze ukwazi ukuzisa umntu, kuyimfuneko ukusebenzisa i-ammonia kuboya bekotoni kunye nokulahleka kwe-whisky.
"Nguwe odla into"
Xa ukutyhelwa kokutya, okokuqala, kuncoma umntu malunga neeyure ezingama-6. Ukuba akukho ukuhlanza kunye nesicefe, kufuneka uphuze amanzi ngama-sips amancinci - ukuze unciphise uxinzelelo lweexinesi kwaye ukhawuleze ukurhoxiswa kwabo emzimbeni. Ngokukhawuleza, akunakwenzeka ukubuyela kugqirha, kuyafaneleka ukuba uphuze umbane osebenzayo (ngesantya se-tablet 1 nge-10 kg yesisindo - umzekelo, ngesisindo somzimba we-60 kg sithatha amacwecwe a-6). Xa ukuhlanza kunye nesiphithiphithi kusasaza, kuyimfuneko ukusela 1,5-2 ilitha amanzi kwiseshoni enye kwaye uye kwindlu yokuhlambela. Leli "ikhaya" lokuhlamba isisu. Ngaba izinga lokushisa landa? Ngokuncediswa iziyobisi, asiyinciphisi. Kukulungele ukusela amanzi ngamancinci amancinci. Ukuba kungakapheli iiyure ezingama-6 emva kobutyhefu bokuphuculwa okwenzekayo, qiniseka ukuba uze kwiofisi yegqirha. Nceda nceda! Xa uncedisa ukutyhelwa kokutya, kufuneka uqiniseke ukuba uxilongwe. Emva koko, ukuba kukuhlaselwa kwezilonda, ukuhlamba isisu kuvunyelwe.
Kuloliwe okanye kwenye indawo ummelwane waqala ukuzala? Ngaphambi kokuba i-ambulensi ifike, kufuneka ubeke ibhinqa kumqolo okanye kwicala lakho, jonga ukuphefumla kwakhe. Kwaye ngokubanzi, zama ukudala umoya omhle kuye: ukuzolalisa, xela ibali ngokuphela kokuzonwabisa, kuquka umculo ophumayo. Kuyinto enqwenelekayo ukuba umama ozayo uguquke kwiingubo ezihlambulukileyo okanye ahlambe (mhlawumbi, ukuba kukho into enjalo). Yonwabe - ukuba ukhona phambi kokuzalwa kobomi obutsha.
Iipropati zeoli efunekayo yeedrafruit
I-Pasta uAlfredo kunye nama-meatballs
Amakhowe e-recipe agxile
Ilayiti yelayisi kunye nemifuno eyomileyo
Ngaba ukushona kwelanga kunokuchaphazela izifo ezikhoyo?
Ndingenaso isifuba, ngaba kufanelekile ukukhathazeka?
2 zokupheka iimayonnaise ekhaya
Ukwesaba abantwana: ukwesaba ukufa
I-pear cocktail kunye ne-rosemary
Izakhiwo zonyango kunye nemilingo ye-muscovite